» शालिकराम आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा : कति बलियो छ आरोपपत्र ?
९ भाद्र २०७६, सोमबार १४:४९
कुनैपनि व्यक्ति विरुद्ध कुनै कसुरको आरोप लगाउनुपूर्व प्रमाण चाहिन्छ । प्रमाण र अन्य तथ्यकाबारेमा विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको व्यहोरालाई अभियोगपत्र भनिन्छ ।सञ्चारकर्मी लामिछाने विरुद्ध पेस भएको अभियोगपत्र कत्तिको बलियो छ त ? जिल्ला अदालत चितवनबाट कान्तिपुरले २३ पेज लामो अभियोगपत्र प्राप्त गरेको छ । के छ त अभियोगपत्रमा ?
न्यूज २४ का पत्रकार युवराज कँडेलमाथिको अभियोग अझै रोचक छ । प्रहरीले ‘सिधा कुरा जनतासँग’ को कार्यक्रममा युवराजले काम गराउने गरेका मृतक शालिकरामलाई समाचार बनाउने क्रममा गाली गर्ने गरेको भन्दै बयान गरेको’ भनी त्यो बयानले दुरुत्साहन पुष्टि हुने दाबी गरेको छ । कार्यक्षेत्रमा मातहतका सहकर्मीहरुसँगको सम्बन्ध र व्यवहार दुरुत्साहन पुष्टि गर्ने प्रमाण होइन, तर प्रहरीले त्यसैलाई प्रमाण मानेको छ ।
तर प्रहरीले भने भिडियो रेकर्डका आधारमा दुरुत्साहनको मुद्दा चलाएको देखिन्छ । अरु विवरण र प्रमाणबाट आफ्नो अभियोग पुष्टि गर्ने अवसरबाट प्रहरी चुकेको छ । अदालतले प्रहरीले पेश गरेको अभियोग र प्रमाणलाई कुन रुपमा लिन्छ, त्यसकै आधारमा तीनै जना आरोपितहरु पुर्पक्ष थुनामा रहने, धरौटीमा छाड्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने तय हुनेछ । यसका लागि कम्तिमा पनि सोमबार अबेर वा मंगलबारसम्म पर्खनुपर्ने हुनसक्छ । इकान्तिपुरबाट साभार ।